Aka aka - JUAN JUAN
Typesdị microfiber ndị a na-ahụkarị na-eme dị iche iche nke polyester; polyamides (eg, naịlọn, Kevlar, Nomex, trogamide); na nchikota nke polyester, polyamide, na polypropylene. A na-eji Microfiber emepụta ute, akwa, na akwa, maka uwe, akwa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na ngwaahịa nhicha. A na-ahọrọ ọdịdị, nha, na njikọta nke eriri sịntetik maka njirimara ụfọdụ, gụnyere ịdị nro, ike, nmịkọrọ mmiri, mma mmiri, electrostatics, na ikike nzacha.
Dị ka nkọwa na wikipedia, Microfiber bụ ezigbo ihe eji eme akwa nhicha.
A. Uru iji hichaa ájá nke micrometers ebe ọ bụ na kewara conjugated emep uta eri na-eji.
B. Oge ndụ dị okpukpu anọ karịa akwa nhicha ahụ.
Ikike pụrụ iche nke ịmịkọrọ mmanụ, ma sie ike ịchacha agba.
D.Due na njikọta hydrogen, microfibre akwa nwere polyamide na-amịkọrọ ma jide mmiri karịa ụdị eriri ndị ọzọ.
Ndị na-ere ụgbọ ala na-ejikarị Microfiber arụ ọrụ dịka iwepu wax si na ihe osise, ịkọwapụta ngwa ngwa, ihicha ime, ihicha iko, na ihicha. N'ihi eriri dị mma ha na-anaghị ahapụ ihe ntụ ma ọ bụ ntụ, ndị na-ebu ụgbọ ala na ndị nwere ịnụ ọkụ n'obi na-eji akwa nhicha ahụ microfiber eme ihe n'ụzọ yiri nke ahụ akpụkpọ anụ chamois.
A na-eji Microfiber n'ọtụtụ ngwa nhicha ndị ọkachamara, dịka ọmụmaatụ na mops na ihicha akwa. Ọ bụ ezie na mops microfiber na-efu ihe karịrị mops microfiber, ha nwere ike bụrụ ndị nwere akụ na ụba n’ihi na ha na-adịru ogologo oge ma chọọ obere mbọ iji
Dabere na ule na-eji ihe microfiber iji hichaa elu na-eduga n'ibelata ọnụ ọgụgụ nke nje site na 99%, ebe ihe nhicha igwe na-ebelata nọmba a naanị site na 33%.
A na-eji akwa microfiber hichaa anya foto dị ka ha na-etinye ihe mmanu mmanu na-enweghị abrasive ma ọ bụ hapụ ihe fọdụrụ
A ga-asacha ebu na microfiber naanị na nchacha akwa, ọ bụghị mmanu, nro onwe ya, nchacha ncha
I. Usoro iji mee akwa microfiber / akwa nhicha
Ajụjụ maka Microfiber Towels / Cloth:
1.What bụ technology maka microfiber n'aka Towels / Cloth?
Kpara ma ọ bụ na-abụghị kpara.
2.The akụrụngwa na-eji?
80% polyester & 20% polyamide ma ọ bụ 100% polyester ma ọ bụ 85% polyester na 15% polyamide (220gsm / 380gsm)
3.What ụdị mbukota?
a. Onye OPP akpa
4. Ahaziri mma
Nke gara aga: Nwa nkita
Osote: Microfiber Rags
Microfiber Ezinaụlọ Towels
Tabeel Tattoo akwa